လူ့အခွင့်အရေးနေ့တွင် ဦးအောင်မင်း လက်ရှိအခြေအနေ ရှင်းပြ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
တနင်္လာနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ 10 ရက် 2012 ခုနှစ် မဇ္စျိမ သတင်း – မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
ထို့ပြင် လက်ရှိ ကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်သော အလုပ်သမား တောင်းဆိုချက်များ၊ လယ်ယာမြေ အသိမ်းခံရမှုများ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စများကိုလည်း “အစိုးရနှင့် ပြည်သူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပ ပြီး ပွင့်လင်းစွာ အဖြေရှာမှုများ ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောဆိုသွားသည်။
ဦးအောင်မင်း ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပါဝင်နေသော ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၁၁ ဖွဲ့နှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သော်လည်း ကချင်ပြည် နယ် “ပဋိပက္ခတွေ ပြန်လည် ပြင်းထန်လာတာနဲ့ အမျှ ယခင်က ၁၇ နှစ်လုံး ရှိခဲ့တဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတွေ ပျောက်ကွယ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲမှုများကို ပြုလုပ်ရုံနဲ့ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မရရှိနိုင်ဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့ နားလည် သဘောပေါက်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
“နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေး ပြသနာများဟာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာထက် ပိုမိုရှုပ် ထွေးပြီး သိမ်မွေ့နက်နဲမှာများ ရှိတယ်ဆိုတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာခွဲဝေမှုနဲ့ အရင်းအမြစ် ခွဲဝေသုံးစွဲမှု တွေကိုလည်း တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားအားလုံး အကျိုးကျေးဇူး ရရှိစေရေးအတွက်လုပ်ဆောင် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးအောင်မင်း က ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားသည်။
အခမ်းအနားသို့ ကုလ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် MR. Ashok Nigam ၊ ကုလ လူ့အခွင့် အရေး ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး(OHCHR) မှ Ms. Matilda Bonger ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြ တို့လည်း တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်း လူ့အခွင့်အရေးကို မြှင့်တင်ရာတွင် ပညာရေးကို အခြေခံပြီးဖော်ဆောင်သင့် ကြောင်း ပြောဆိုသွားသည်။
“မတူတဲ့ နေရာတွေကနေပြီး ထွက်လာတဲ့ အသံတွေကို နားထောင်ရပါမယ်။ အသံတွေက ဘာကြောင့် ထွက်လာရ တာလဲ ဆိုတာကို နားထောင်ရပါမယ်။ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်တဲ့လမ်းမှာ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို သိရှိဖို့ ပညာရေးက အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်တာ အပေါ်ကနေ ပြုလုပ်လို့မရပါဘူး။ အောက်ခြေ ပြည်သူလူထုကနေ စတင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဆိုသည်။
လူ့အခွင့်အရေးတွင် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်လည်း အလွန်အရေးပါကြောင်း မြန်မာ ဂျာနယ်လစ်အဖွဲ့ MJA မှ ဦးကိုကို က ပြောဆိုသွားသည်။
“လွတ်လပ်စွာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခွင့် ရခြင်းဟာ လူ့အခွင့်အရေးရဲ့ အုတ်မြစ် အခြေခံ ဖြစ်တယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ လူ့အခွင့် အရေးကို မှန်ကန်စွာ ပါဝင်ပတ်သက် တောင်းဆိုခြင်းဟာ ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်ကို သွားတဲ့ အထောက်အကူ ဖြစ်ပါ တယ်” ဟု ဆိုသည်။
နေ့လည် ၂ နာရီက စတင်ကျင်းပသော အခမ်းအနားတွင် တက်ရောက်လာသူ တချို့က လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက် ပြီး အောက်ခြေ ပြည်သူလူထုအထိ တိုက်ရိုက် ဗဟုသုတ ရရှိစေနိုင်ရန်အတွက် ယခုထက်ပို မိုဆောင်ရွက်နို်င်ရန် ကြိုးပမ်းသင့်ကြောင်းကို အကြံပြု ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
This entry was posted on December 18, 2012, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← သန်းခေါင်စာရင်း ဥပဒေကြမ်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ
အထူးသတင်း Hidden Genocide မြန်မာစာတမ်းထိုး (လင့်ကိုနှိပ်၍ကြည့်ပါ။) →